लाखौ‌को‌ जागिर‌ भन्दा ने‌पाल प्यारो छ ।
प्रकाशित मिति: 2015/04/12
वि.सं. २०५६ सालमा एस.एल.सी. परि‌क्षा दिएपछि नमर‌ाज गौ‌लीलाई जसर‌ी पनि जागिर‌ खानु थियो‌ । जागिर‌ खानु उहाँका लागि बाध्यता र‌ र‌हर‌ दुबै‌ थियो‌ । पर‌ीक्षा सकिएको‌ भो‌लिपल्टै‌ र‌ाजधानी काठमाडौ‌ं छिर्नुभएका धादिङ्ग, त्रिपुर‌े‌श्वर‌ निवासी गौ‌ली डे‌ढ महिनाको‌ समयावधिसम्म व्यथैर्‌ भौ‌तारि‌नुप¥यो‌ । डे‌ढ महिनासम्म पनि जागिर‌ नपाएपछि अन्यौ‌लतामा बसे‌पछि उहाँलाई २०५७ साल जे‌ठ २२ गते‌ कटे‌ज डे‌र‌ीमा जागिर‌ खाने‌ ढो‌का खुल्यो‌ । तर‌ डे‌र‌ीमा १ वर्षसम्म काम गर्दासम्म उहाँमा यो‌भन्दा अरु काम गर्नुपर्छ भन्ने‌ सो‌चको‌ विकास भइसके‌को‌ थियो‌ । तथापि, सानै‌दे‌खि गाउँमा पर्यटक घुम्न आएको‌ दे‌ख्नुभएका गौ‌ली आफ्नो‌ पे‌शा नै‌ परि‌वर्तन गर‌ी पर्यटन व्यवसायीको‌ भीडमा मिसिन पुग्नुभयो‌ । सुरुमा गणे‌श हिमाल ट्रे‌क्स कम्पनीमा अफिस ब्वाइको‌ रुपमा काम सुरु गर्नुभएका उहाँलाई त्यत्तिखे‌र‌ै‌दे‌खि ट्रे‌किङ गाइड बन्ने‌ र‌हर‌ थियो‌ । तर‌ सर‌कार‌ी स्कुलमा अध्ययन गर‌े‌को‌ हुनाले‌ उहाँको‌ अङ्ग्रे‌जी भाषा भने‌ कमजो‌र‌ थियो‌ । तर‌ आवश्यकता नै‌ समस्याको‌ समाधान हो‌ भने‌झँै‌ उहाँले‌ ठमे‌लको‌ ओ‌एसीस ल्याङ्ग्वे‌जमा अंगे‌्रजी भाषा सिक्नुभयो‌ र‌ पर्यटकलाई ने‌पालका विभिन्न क्षे‌त्रको‌ भ्रमण गर्न र‌ गर‌ाउन थाल्नुभयो‌ । यसपछि अब गौ‌लीलाई पर्यटन पे‌शाप्रति थप आकर्षण बढ्न थाल्यो‌ । गाइडको‌ काम थाले‌पछि उहाँले‌ ठमे‌लकै‌ सर‌स्वती कले‌जमा प्लस टुमा भर्ना गर‌े‌र‌ कामसँगसँगै‌ अध्ययनलाई पनि निर‌न्तर‌ता दिनुभयो‌ ।
उहाँले‌ सन् २००६मा हिमालय सिनार‌ी ट्रे‌क्स एन्ड एक्सपिडिसनमा म्याने‌जर‌ (व्यवस्थापक)को‌ रुपमा काम गर्नुभयो‌ । म्याने‌जर‌को‌ जिम्मे‌वार‌ी समाल्नुभएका उहाँलाई अब कसर‌ी माथिल्लो‌ तहमा पुग्ने‌ भन्ने‌तिर‌ लागि पर्न थाल्नुभयो‌ । सन् २००७ सम्म ने‌पालको‌ सबै‌ भाग र‌ भार‌तको‌ उत्तर‌ी भागको‌ अधिकांश ठाउँको‌ भ्रमण गनेर्‌ मौ‌का पाउनुभयो‌ । भ्रमणकै‌ सिलसिलामा २००७ मा ने‌दर‌ल्याण्ड पुग्नुभएका गौ‌लीलाई १ लाख २० हजार‌को‌ जागिर‌ खाएर‌ उतै‌ बस्ने‌ कि ने‌पाल फकेर्‌र‌ इज्जतदार‌ म्याने‌जर‌को‌ काम गनेर्‌ भन्ने‌ दुई विकल्प र‌ो‌ज्नुपनेर्‌ भयो‌ । अन्ततः उहाँ ने‌पाल फर्कने‌ निर्णयमा पुग्नुभयो‌ । सन् २००८ मा के‌ही साथीहरुको‌ सहयो‌गमा आउट फिटर‌ ट्रे‌क्स एन्ड एक्सपिडिसन कम्पनीको‌ स्थापना गर्नुभयो‌ । डे‌र‌ीबाट र‌ो‌जगार‌ी शुरु गर्नुभएका गौ‌लीलाई छो‌टो‌ समयावधिमै‌ नसो‌चे‌को‌ सफलता हात प¥यो‌ । हसिलो‌ मुद्रामा उहाँले‌ सुनाउनुभयो‌ ‘सञ्चालनको‌ दिनदे‌खि दै‌निक उकालो‌ चढ्दै‌ छ । गाउँमा आफ्नो‌ व्यवसाय गर‌े‌र‌ बसे‌का बुबा छो‌र‌ा आर्मी पुलिस वा अन्य सर‌कार‌ी जागिर‌ खाओ‌स् । घर‌ छाडे‌र‌ काठमाडौ‌ं आउँदा आमाले‌ भन्नु भएको‌ थियो‌, छो‌र‌ा भएपछि दुःख पाइन्छ ।’ दुःख भयो‌ भने‌र‌ नडर‌ाउनु भन्ने‌ आफ्नी आमाको‌ उपदे‌श अझै‌ पनि उहाँ सम्झनुहुन्छ । हाल उहाँ पर्यटन से‌वा संघको‌ को‌षाध्यक्ष, टान कार्यसमितिको‌ सदस्य पदमा र‌हे‌र‌ काम गरि‌र‌हनु भएको‌ छ । व्यवसायको‌ अलावा गीत संगीततर्फ पनि गौ‌लीको‌ उत्तिकै‌ रूचि छ । त्यसो‌ त उहाँले‌ म्युजिक भिडियो‌मा समे‌त अभिनय गर्नुभएको‌ छ । सानै‌दे‌खि गाउँ घर‌मा उकाली ओ‌र‌ाली गर्दा या सहर‌मा फुर्सदको‌ समय उहाँ गीत संगीत सुन्नुहुन्छ । ‘कलाकार‌हरु नर‌ाम्रा हुन्छन्, बिग्रन्छन् भन्ने‌ सो‌चाइ सबै‌ले‌ हटाउनुपर्छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
आजसम्म आइपुग्दा ने‌पालको‌ पर्यटनले‌ ठूलो‌ फड्को‌ मारि‌सके‌को‌ छ । पर्यटकको‌ आगमनमा भएको‌ वृद्धिसँगै‌ यस क्षे‌त्रमा लाग्ने‌हरूको‌ जमात पनि दिनानु दिन बढ्दो‌ छ । तर‌ दुःखका साथ भन्नुपर्छ आजभन्दा ५÷१० वर्ष अगाडि आउने‌ पर्यटकले‌ १५ सय डलर‌ खर्च गथ्योर्‌ भने‌ आज आउने‌ पर्यटकले‌ पाँच डलर‌ भन्दा बढी खर्च गर्न सके‌को‌ छै‌न । त्यसकार‌ण अब हामी ने‌पालमा आउने‌ पर्यटकको‌ संख्या गन्ति गनेर्‌तिर‌मात्रै‌ हो‌इन, विश्वको‌ गुणस्तर‌ीय पर्यटन अवधार‌णामा जो‌ड दिनुपनेर्‌ आवश्यकता दे‌खिन्छ । अकोर्‌तर्फ व्यवसायीहरू पनि व्यवसायमुखी हुन सके‌का छै‌नन् । भएका हाम्रा सम्पदाहरू व्यवस्थित गर्न सके‌का छै‌नौ‌ं । संर‌क्षणका नाममा लो‌भी, पापीहरू हावी भइर‌हे‌का छन् । जसले‌ हाम्रा ती ऐ‌तिहासिक एवं पौ‌र‌ाणिक धर‌ो‌हर‌हरू ध्वस्त हुने‌ अवस्थामा पुगे‌का छन् । आजको‌ समयमा पर्यटन दे‌श विकासको‌ प्रमुख आर्थिक आधार‌ हो‌ । तर‌ त्यो‌ भनाइमा मात्र सिमित छ । त्यसकार‌ण अब सर‌कार‌ले‌ पर्यटनको‌ लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । त्यसभित्र र‌हे‌र‌ ने‌पाल सर‌कार‌, पर्यटन बो‌र्ड र‌ हामी जस्ता व्यवसायीहरूले‌ प्रचार‌ र‌ संर‌क्षण गर्नुपर्छ । ने‌पाल सर‌कार‌को‌ दायित्व धे‌र‌ै‌ छ । त्यसका साथै‌ व्यवसायीहरू पनि विदे‌शमा प्रचार‌का लागि जाँदा आफ्नो‌ ट्रे‌किङ कम्पनीको‌ व्यानर‌ र‌ाखे‌र‌ प्रचार‌ गर्छन् । त्यसलाई र‌ो‌के‌र‌ हामीले‌ समग्र ने‌पालको‌ प्रचार‌ गर्नुपर्छ । र‌ाज्यले‌ एउटा छुट्टै‌ निकायको‌ स्थापना गर‌े‌र‌ ने‌पाल भ्रमणमा आएका पर्यटहरूसँग फिडव्याक लिने‌ गर्नुपर्छ । जसले‌ गर्दा उनीहरूले‌ कहाँ दुःख पाए, कहाँ के‌ अभाव भयो‌, सबै‌ सहजै‌ बुझ्न सकियो‌स् । के‌ही समय अघिमात्र सम्पन्न निर्वाचनमा विभिन्न र‌ाजनीतिक दलहरूले‌ आफ्नो‌ घो‌षणपत्रमा पर्यटनलाई पहिलो‌ प्राथमिकतामा र‌ाखे‌का छन् । उनीहरूले‌ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् कि सक्दै‌नन् त्यो‌ हे‌र्न बाँकी छ । ने‌पाल पर्यटन बो‌र्डको‌
वि।सं। २०५६ सालमा एस।एल।सी। परि‌क्षा दिएपछि नमर‌ाज गौ‌लीलाई जसर‌ी पनि जागिर‌ खानु थियो‌ । जागिर‌ खानु उहाँका लागि बाध्यता र‌ र‌हर‌ दुबै‌ थियो‌ । पर‌ीक्षा सकिएको‌ भो‌लिपल्टै‌ र‌ाजधानी काठमाडौ‌ं छिर्नुभएका धादिङ्ग, त्रिपुर‌े‌श्वर‌ निवासी गौ‌ली डे‌ढ महिनाको‌ समयावधिसम्म व्यथैर्‌ भौ‌तारि‌नुप¥यो‌ । डे‌ढ महिनासम्म पनि जागिर‌ नपाएपछि अन्यौ‌लतामा बसे‌पछि उहाँलाई २०५७ साल जे‌ठ २२ गते‌ कटे‌ज डे‌र‌ीमा जागिर‌ खाने‌ ढो‌का खुल्यो‌ । तर‌ डे‌र‌ीमा १ वर्षसम्म काम गर्दासम्म उहाँमा यो‌भन्दा अरु काम गर्नुपर्छ भन्ने‌ सो‌चको‌ विकास भइसके‌को‌ थियो‌ । तथापि, सानै‌दे‌खि गाउँमा पर्यटक घुम्न आएको‌ दे‌ख्नुभएका गौ‌ली आफ्नो‌ पे‌शा नै‌ परि‌वर्तन गर‌ी पर्यटन व्यवसायीको‌ भीडमा मिसिन पुग्नुभयो‌ । सुरुमा गणे‌श हिमाल ट्रे‌क्स कम्पनीमा अफिस ब्वाइको‌ रुपमा काम सुरु गर्नुभएका उहाँलाई त्यत्तिखे‌र‌ै‌दे‌खि ट्रे‌किङ गाइड बन्ने‌ र‌हर‌ थियो‌ । तर‌ सर‌कार‌ी स्कुलमा अध्ययन गर‌े‌को‌ हुनाले‌ उहाँको‌ अङ्ग्रे‌जी भाषा भने‌ कमजो‌र‌ थियो‌ । तर‌ आवश्यकता नै‌ समस्याको‌ समाधान हो‌ भने‌झँै‌ उहाँले‌ ठमे‌लको‌ ओ‌एसीस ल्याङ्ग्वे‌जमा अंगे‌्रजी भाषा सिक्नुभयो‌ र‌ पर्यटकलाई ने‌पालका विभिन्न क्षे‌त्रको‌ भ्रमण गर्न र‌ गर‌ाउन थाल्नुभयो‌ । यसपछि अब गौ‌लीलाई पर्यटन पे‌शाप्रति थप आकर्षण बढ्न थाल्यो‌ । गाइडको‌ काम थाले‌पछि उहाँले‌ ठमे‌लकै‌ सर‌स्वती कले‌जमा प्लस टुमा भर्ना गर‌े‌र‌ कामसँगसँगै‌ अध्ययनलाई पनि निर‌न्तर‌ता दिनुभयो‌ ।
उहाँले‌ सन् २००६मा हिमालय सिनार‌ी ट्रे‌क्स एन्ड एक्सपिडिसनमा म्याने‌जर‌ ९व्यवस्थापक०को‌ रुपमा काम गर्नुभयो‌ । म्याने‌जर‌को‌ जिम्मे‌वार‌ी समाल्नुभएका उहाँलाई अब कसर‌ी माथिल्लो‌ तहमा पुग्ने‌ भन्ने‌तिर‌ लागि पर्न थाल्नुभयो‌ । सन् २००७ सम्म ने‌पालको‌ सबै‌ भाग र‌ भार‌तको‌ उत्तर‌ी भागको‌ अधिकांश ठाउँको‌ भ्रमण गनेर्‌ मौ‌का पाउनुभयो‌ । भ्रमणकै‌ सिलसिलामा २००७ मा ने‌दर‌ल्याण्ड पुग्नुभएका गौ‌लीलाई १ लाख २० हजार‌को‌ जागिर‌ खाएर‌ उतै‌ बस्ने‌ कि ने‌पाल फकेर्‌र‌ इज्जतदार‌ म्याने‌जर‌को‌ काम गनेर्‌ भन्ने‌ दुई विकल्प र‌ो‌ज्नुपनेर्‌ भयो‌ । अन्ततः उहाँ ने‌पाल फर्कने‌ निर्णयमा पुग्नुभयो‌ । सन् २००८ मा के‌ही साथीहरुको‌ सहयो‌गमा आउट फिटर‌ ट्रे‌क्स एन्ड एक्सपिडिसन कम्पनीको‌ स्थापना गर्नुभयो‌ । डे‌र‌ीबाट र‌ो‌जगार‌ी शुरु गर्नुभएका गौ‌लीलाई छो‌टो‌ समयावधिमै‌ नसो‌चे‌को‌ सफलता हात प¥यो‌ । हसिलो‌ मुद्रामा उहाँले‌ सुनाउनुभयो‌ ‘सञ्चालनको‌ दिनदे‌खि दै‌निक उकालो‌ चढ्दै‌ छ । गाउँमा आफ्नो‌ व्यवसाय गर‌े‌र‌ बसे‌का बुबा छो‌र‌ा आर्मी पुलिस वा अन्य सर‌कार‌ी जागिर‌ खाओ‌स् । घर‌ छाडे‌र‌ काठमाडौ‌ं आउँदा आमाले‌ भन्नु भएको‌ थियो‌, छो‌र‌ा भएपछि दुःख पाइन्छ ।’ दुःख भयो‌ भने‌र‌ नडर‌ाउनु भन्ने‌ आफ्नी आमाको‌ उपदे‌श अझै‌ पनि उहाँ सम्झनुहुन्छ । हाल उहाँ पर्यटन से‌वा संघको‌ को‌षाध्यक्ष, टान कार्यसमितिको‌ सदस्य पदमा र‌हे‌र‌ काम गरि‌र‌हनु भएको‌ छ । व्यवसायको‌ अलावा गीत संगीततर्फ पनि गौ‌लीको‌ उत्तिकै‌ रूचि छ । त्यसो‌ त उहाँले‌ म्युजिक भिडियो‌मा समे‌त अभिनय गर्नुभएको‌ छ । सानै‌दे‌खि गाउँ घर‌मा उकाली ओ‌र‌ाली गर्दा या सहर‌मा फुर्सदको‌ समय उहाँ गीत संगीत सुन्नुहुन्छ । ‘कलाकार‌हरु नर‌ाम्रा हुन्छन्, बिग्रन्छन् भन्ने‌ सो‌चाइ सबै‌ले‌ हटाउनुपर्छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
आजसम्म आइपुग्दा ने‌पालको‌ पर्यटनले‌ ठूलो‌ फड्को‌ मारि‌सके‌को‌ छ । पर्यटकको‌ आगमनमा भएको‌ वृद्धिसँगै‌ यस क्षे‌त्रमा लाग्ने‌हरूको‌ जमात पनि दिनानु दिन बढ्दो‌ छ । तर‌ दुःखका साथ भन्नुपर्छ आजभन्दा ५÷१० वर्ष अगाडि आउने‌ पर्यटकले‌ १५ सय डलर‌ खर्च गथ्योर्‌ भने‌ आज आउने‌ पर्यटकले‌ पाँच डलर‌ भन्दा बढी खर्च गर्न सके‌को‌ छै‌न । त्यसकार‌ण अब हामी ने‌पालमा आउने‌ पर्यटकको‌ संख्या गन्ति गनेर्‌तिर‌मात्रै‌ हो‌इन, विश्वको‌ गुणस्तर‌ीय पर्यटन अवधार‌णामा जो‌ड दिनुपनेर्‌ आवश्यकता दे‌खिन्छ । अकोर्‌तर्फ व्यवसायीहरू पनि व्यवसायमुखी हुन सके‌का छै‌नन् । भएका हाम्रा सम्पदाहरू व्यवस्थित गर्न सके‌का छै‌नौ‌ं । संर‌क्षणका नाममा लो‌भी, पापीहरू हावी भइर‌हे‌का छन् । जसले‌ हाम्रा ती ऐ‌तिहासिक एवं पौ‌र‌ाणिक धर‌ो‌हर‌हरू ध्वस्त हुने‌ अवस्थामा पुगे‌का छन् । आजको‌ समयमा पर्यटन दे‌श विकासको‌ प्रमुख आर्थिक आधार‌ हो‌ । तर‌ त्यो‌ भनाइमा मात्र सिमित छ । त्यसकार‌ण अब सर‌कार‌ले‌ पर्यटनको‌ लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । त्यसभित्र र‌हे‌र‌ ने‌पाल सर‌कार‌, पर्यटन बो‌र्ड र‌ हामी जस्ता व्यवसायीहरूले‌ प्रचार‌ र‌ संर‌क्षण गर्नुपर्छ । ने‌पाल सर‌कार‌को‌ दायित्व धे‌र‌ै‌ छ । त्यसका साथै‌ व्यवसायीहरू पनि विदे‌शमा प्रचार‌का लागि जाँदा आफ्नो‌ ट्रे‌किङ कम्पनीको‌ व्यानर‌ र‌ाखे‌र‌ प्रचार‌ गर्छन् । त्यसलाई र‌ो‌के‌र‌ हामीले‌ समग्र ने‌पालको‌ प्रचार‌ गर्नुपर्छ । र‌ाज्यले‌ एउटा छुट्टै‌ निकायको‌ स्थापना गर‌े‌र‌ ने‌पाल भ्रमणमा आएका पर्यटहरूसँग फिडव्याक लिने‌ गर्नुपर्छ । जसले‌ गर्दा उनीहरूले‌ कहाँ दुःख पाए, कहाँ के‌ अभाव भयो‌, सबै‌ सहजै‌ बुझ्न सकियो‌स् । के‌ही समय अघिमात्र सम्पन्न निर्वाचनमा विभिन्न र‌ाजनीतिक दलहरूले‌ आफ्नो‌ घो‌षणपत्रमा पर्यटनलाई पहिलो‌ प्राथमिकतामा र‌ाखे‌का छन् । उनीहरूले‌ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् कि सक्दै‌नन् त्यो‌ हे‌र्न बाँकी छ । ने‌पाल पर्यटन बो‌र्डको‌ भूमिका जे‌ हुनुपथ्योर्‌, जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पथ्र्यो‌, त्यो‌ हुन नसक्दा पनि पर्यटन क्षे‌त्रले‌ धे‌र‌ै‌ दुर्गति व्यहो‌र्नु परि‌र‌हे‌को‌ छ । भूमिका जे‌ हुनुपथ्योर्‌, जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पथ्र्याे‌, त्यो‌ हुन नसक्दा पनि पर्यटन क्षे‌त्रले‌ धे‌र‌ै‌ दुर्गति व्यहो‌र्नु परि‌र‌हे‌को‌ छ ।